२०७७ भदौ १० बुधबार १३:४०:४३ प्रकाशित
काठमाडौं- बढ्दो कोरोना संक्रमण र लम्बिँदो लकडाउनले प्रभावित भएका क्षेत्रमध्ये एक हो, शैक्षिक क्षेत्र। जसअन्तर्गत पर्ने चिकित्सा शिक्षामा पनि यसले असर नपर्ने कुरै भएन।
लकडाउनकै कारण नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषदले लिने लाइसेन्स र चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। वर्षमा तीन पटकसम्म हुने लाइसेन्सको परिक्षा कोरोना महामारीका कारण हालसम्म पटक पटक स्थगित भएको छ।
देशको परिस्थिति सहज भएपछि मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने यी तीन परिषद र आयोगको तयारी छ। यद्यपि कहिले र कसरी गर्ने परीक्षा सञ्चालन गर्ने उनीहरुको आफ्नै तयारी छ।
स्थिति सहज हुनेबित्तिकै परीक्षा हुन्छ : मेडिकल काउन्सिल
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिँदै आएको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षा प्रभावित भएको छ। यही भदौ ७ गतेदेखि लाइसेन्स परीक्षा लिने भनिए पनि अवस्था सामान्य नभएको भन्दै काउन्सिलले उक्त परीक्षा स्थगित गरेको थियो। यसअघि चैत ८ गते तय भएको परीक्षा पनि स्थगित भएको थियो।
तर, परीक्षा लिनका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा भएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए। देशको परिस्थिति सहज नभएकाले हाल लाइसेन्स परीक्षा लिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षा लिनका लागि प्रश्नपत्र बनाएर तयारी अवस्थामा छ। तर देशको परिस्थिति हाल सामान्य नभएकाले परीक्षा स्थगित गर्नु परेको हो। काउन्सिलले परीक्षा नलिएको भने होइन।’
काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षाका लागि धरान, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, चितवन, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जमै केन्द्र ताकेको छ। लाइसेन्स परीक्षाका लागि चिकित्सकहरु काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छैन। जो जहाँ छन्, त्यहींबाट नै चिकित्सकहरुले लाइसेन्स परीक्षा दिनसक्ने रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यसरी केन्द्र तोकिँदा उहाँहरु त्यहींबाट नै परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ। अवस्था सामान्य भएको दुई–तीन दिनमै परीक्षा लिन काउन्सिल तयार छ।’
लाइसेन्स परीक्षा दिन काउन्सिलमै आउन नपर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए। सबै परीक्षा अनलाइनबाटै हुने भएकाले प्रमाणपत्र लिन मात्र काउन्सिल आउनुपर्ने उनले जानकारी दिए। लाइसेन्स परीक्षाका लागि करिब एक हजार चिकित्सकले फर्म भरेको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलले करिब एक सय जना चिकित्सकलाई अनलाइनमार्फत परीक्षा कहाँ लिँदा सहज हुन्छ भन्नेबारे बुझ्दा ७ सय चिकित्सकले काठमाडौंमा र ३ सय चिकित्सकले आफू भएकै ठाउँमा सहज हुने बताएका थिए।
देशभर हाल २७ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। काउन्सिलले अन्डर ग्र्याजुएटको वर्षमा चार र पोस्ट ग्र्याजुएटको तीन पटक परीक्षा लिँदै आएको छ।
काउन्सिलले एमबिबिएस पढेर आउने सबै चिकित्सकलाई २०५८ सालपछि लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य गरेको थियो। लाइसेन्स पास गरेकाले मात्र चिकित्सा पेसा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा नर्सिङ काउन्सिल
नेपाल मेडिकल काउन्सिल मात्र होइन, नर्सिङ काउन्सिलले पनि कोरोना महामारीका कारण लाइसेन्स परीक्षा स्थगित गर्नु परेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा लाइसेन्स परीक्षा कहिले र कसरी हुन्छ यसै भन्न नसकिने काउन्सिलकी अध्यक्ष गोमादेवी निरौला बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा अब लाइसेन्स परीक्षा कसरी र कहिले हुन्छ? कसरी भन्न सकिन्छ। अब अवस्था सहज भएपछि मात्र हुन्छ।’
बिएससी नर्सिङ र पिसिएल दुवैको एकै पटक लाइसेन्स परीक्षा हुन्छ। अनलाइनबाट समेत परीक्षा लिन सम्भव नभएको उनले बताइन्। सबै आवश्यक डकुमेन्टहरु काठमाडौंमै भएकाले उनीहरुकै आग्रहमा अनलाइन परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
हाल आफूहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा अनलाइन परीक्षा पनि सम्भव छैन। विद्यार्थीहरुकै आग्रहमा हामीले सञ्चालन नगरेका हौं। अब पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’
असार २० गते हुनुपर्ने लाइसेन्स परीक्षा स्थगित भएको हो। फागुन २९ गते भएको लाइसेन्स परीक्षाको लाइसेन्स समेत सबैलाई वितरण गर्न नसकिएको उनले बताइन्। अब मंसिरमा हुने लाइसेन्स परीक्षाको बारेमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिइन्।
अब हुने परीक्षा भनेको मंसिरमा हो। उनले भनिन्, ‘त्यो बेलासम्म अवस्था के–कस्तो हुन्छ। छलफल गरेर मात्र कुनै निर्णय लिन्छौं।’
काउन्सिलले वर्षमा तीन पटक लाइसेन्स परीक्षा लिँदै आएको छ। देशभर हाल अनमी, विदेशी नर्स सबै गरी करिब ९५ हजार नर्स काउन्सिलमा दर्ता छन्।
प्रदेश अनुसार परीक्षा गर्ने मोडालिटीमा जाँदै फार्मेसी परिषद
नेपाल फार्मेसी परिषदले प्रदेश अनुसार वर्गीकरण गरी लाइसेन्स परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। तर यो परीक्षा पनि स्थिति सहज भएपछि मात्र हुने काउन्सिलले जनाएको छ।
लाइसेन्स परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको तथ्यांक प्रदेश अनुसार वर्गीकरण गरिएको परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव पाण्डेले बताए। अब बस्ने बोर्डस्तरीय बैठकले यस बारेमा निर्णय हुने उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले सबै परीक्षार्थीहरुको तथ्यांक प्रदेश अनुसार वर्गीकरण गरेका छौं। केन्द्रमा मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिँदैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको जनघनत्व बढी छ। त्यसैले प्रदेश अनुसार गर्ने तयारी छ।’
प्रदेश अनुसार परीक्षा सञ्चालन भए विद्यार्थीको भार पनि नपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ छ।
लकडाउन नभएको भए चैत र साउनमा फार्मेसी परिषदको परीक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो। परिषदले पनि चार–चार महिनाको अन्तरालमा वर्षको तीन पटक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
हाल फार्मेसी ब्याजलर गर्ने ४ हजार ४७ र डिप्लोमा गर्ने ८ हजार फर्मासिस्ट काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्।
सिसिएमसीको अनुमतिपछि परीक्षा सञ्चालन हुन्छ : चिकित्सा शिक्षा आयोग
चिकित्सकहरुको लाइसेन्स परीक्षासँगै स्नातोकोत्तर (पिजी) तहको प्रवेश परीक्षा समेत प्रभावित भएको छ।
प्रवेश परीक्षाको लागि आन्तरिक तयारी अवस्थामा रहेको चिकित्सका शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले बताए। लकडाउनका कारण जेठमा हुनुपर्ने प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको उनले जानकारी दिए।
‘हामी परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी अवस्थामा छौं। तर स्थिति सामान्य नभएसम्म परीक्षा हुने अवस्था छैन,’ उनले भने।
प्रवेश परीक्षा नहुँदा अहिले त्यति ढिलो नभए पनि अवस्था यस्तै रहे विद्यार्थीको अध्ययनमा प्रभाव पर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘सिसिएमसीले अब परीक्षा लिन मिल्छ भनेर अनुमति दिएपछि मात्र हामी परीक्षा सञ्चालन गर्छौं।’
१. बिहीबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए?
२. देशभर ३१ हजार ८९८ जना स्रक्रमित होम आइसोलेसनमा
३. काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ६१५ जना कोरोना संक्रमित थपिए
४. द‍ेशभर ३ सय ८० जना संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत
५. पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ३८ जना कोरोनामुक्त
६. थप १७ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ९०४ पुग्यो
७. पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २ हजार ३६४ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण
८. भारतमा कोभिड–१९ संक्रमित ८० लाख नाघे, १ लाख २० हजार बढीको मृत्यु
९. म्याग्नस फर्माले बनायाे रगतलाई पातलो बनाउने रिभारोक्सबन औषधि
१०. काभ्रेमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै